जातको समाजशास्त्र- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १, २०७३ कुमारी लामा
जातको आधारमा कसैको बौद्धिकता माथि प्रश्न उठाउनु कतिको जायज होला ? एउटा सामान्यजस्तो लाग्ने घटनाले उमारिदिएको हो यो प्रश्न । फितलो विषयप्रतिको बेखबरीलाई औंल्याउँदै एक नाम चलेका लेखकले भयंकर ‘जजमेन्टल’ वाक्य बोलिपठाएका थिए पंक्तिकारप्रति ।
जनजाति त्यसमा पनि महिला अनि कहाँ थाहा हुन्छ त ।
बौद्धिक मानिने कलमकर्मीकै मुखबाट यस्तो कुरा सुन्दा म निकै बेर रन्थनिएकी थिएँ । बोल्ने व्यक्तिले खासै हेक्का नराखी बोलेका पनि हुन सक्लान् । तर स्वतस्फूर्त निस्कने यस्ता वाक्यका पछाडि निश्चय नै कुनै जाति वर्गलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट देखिन्छ । यसै विषयमा घोत्लिन बाध्य भएकी छु ।
दुई दशकको अन्तरालमा भएका अनेकन राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमहरू मनन गर्दा हाम्रो समाजले निकै फड्को मारेझैँ लाग्छ । २०६२–०६३ को जनआन्दोलनले राज्यको विभेदकारी नीतिको चपेटामा परेर लामो समयसम्म दबिएर बसेका जाति वर्गका मुद्दाहरू प्रखर रूपमा अगाडि ल्याइदियो । झन् नयाँ संविधानले त त्यस्ता विषयमाथि निकै उदारता देखाएको छ ।
तर संविधानमा भएको परिवर्तनजस्तै हामीभित्रको मानसिकतामा परिवर्तन आएको छ कि छैन ? विशेषत: कुनै जाति वर्ग, धर्म, लिंग आदिसँग जोडिएको आम मानसिकतामा कत्तिको परिवर्तन भएको छ ? केही बद्लाब आएजस्तो देखिए पनि जड मानसिकतामा परिवर्तन सजिलो रहेनछ । अझ पनि कति विषयसँग हामीभित्र निहित उही मानसिकता हावी भएको देखिन्छ । यस लेखमा मुख्यत: जोड्न खोजेको कुरा तामाङ जातिप्रतिको आम दृष्टिकोण हो ।
कुनै जातिविशेषलाई सरासर हियाउने भावका अनेकन उखान टुक्का र शब्दहरू हामीमाझ प्रचलित छन् । तामाङका विषयमा त झन् अनेकन छन् । तामाङबारेका प्रचलित केही भनाइले यस जातिको बौद्धिकता र खानपिनको संस्कृतिप्रति डरलाग्दो प्रहार गरेको देखिन्छ । ती उखान तुक्काहरू बिनाकारण र छोटो समयमा निर्माण हुनै सक्दैनन् । निकै लामो समयसम्म राज्यपक्षबाटै त्यस जातिप्रति लादेको विभेदकारी नीतिकै उपज हुन् यी ।
आज पनि जातसँग जोडिएका अनेकन जड मानसिकताहरूसँग घम्साघम्सी झेलिरहेका छन् तामाङलगायत अन्य पिछडिएका जातिहरू । तामाङ जातिप्रतिको बौद्धिकताप्रति या प्रगतिप्रति शंका व्यक्त गर्ने जमात ठूलै छ । एउटा तामाङ मित्रले दुखेसो सहित सुनाएको मार्मिक घटना बारम्बार दिमाग चिमोट्न आइबस्छ ।
उनी तामाङहरूको बाहुल्य भएको रामोछामका हुन् । चिम्से आँखा र थेप्चो नाकले रोक्न नसकेको मिहिनेतले उनलाई बीएस्सीमा गोल्ड मेडल दिलाएको थियो । त्यसै ताका विद्यार्थीकालीन आर्थिक अभावलाई टेको दिन उनी टयुसन पढाउन लामो नाक भएका प्रहरीका उच्च ओहदामा कार्यरतका घरमा पुगेछन् । अन्तर्वार्ता र अन्य वार्तालाप असाध्य सौहार्द रूपमा सकिएपछि अन्तमा नाम सोधिएछ । उनले आफ्नो नाम ... लामा बताएपश्चात् एकाएक संशयमिश्रित मुद्रामा हाकिम साबले ओकलेछन् आफ्नो जड मानसिकता ।
‘ए लामा पो ? पढाउन सक्नुहुन्छ त ?’
उनले बेहोरेको यस घटना सुन्दा म निकै स्तब्ध भएकी थिएँ । कसरी एक जिम्मेवार ओहदामा रहेका व्यक्तिले कुनै जातिप्रति यस्तो संकीर्णता बोल्न सकेका होलान् ?
यस्ता दृष्टिकोणका पछाडि तामाङले भोगेको एक सय साठी वर्षसम्मको विभेदपूर्ण समय चित्रित भएको देखिन्छ । लेखक आहूति त यसलाई ठाडै हिन्दु उच्च जातीय खस अहंकार भन्छन् । तामाङहरूले राम्रो पढेको देख्दा, राम्रो ओहदमा पुग्दा होस् या कुनै बौद्धिक बहसमा भाग लिँदा सधँै नै आश्चर्यभावले हेर्ने गरिन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत तामाङहरूसँगको भलाकुसारीमा उनीहरूले भोगेका यस्तै कुराहरू सुन्नमा आए ।
घरव्यवहार सम्हाल्दै सरासर एमए पास गरेकी लेखक बिना थिङले साथीहरूबाट पाउने प्रतिक्रिया नै तामाङनी भएर पनि कस्तो पढ्न सकेको भन्ने हो । उनलाई लाग्छ– यस्ता प्रतिक्रियाका पछाडि राज्यले यस समुदायप्रति थोपरेको विभेदकारी नीतिका कारण लामो समयसम्म शिक्षामा पहुँच हुन नसक्नु नै हो ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी लोकबहादुर लोप्चनको भोगाइ पनि उस्तै छ । स्कुल पढ्दाताका एक जना शिक्षकले तामाङ त फोहोरी जात हो भनेको होस् या पढाइमा या जागिरमा राम्रो गर्दा निकै अनौठो तरिकाले लिने गरेकाजस्ता अनेकन अनुभव छन् उनीसँग । आजकल त झन् जागिरमा प्रमोसन आदिका कुरालाई लिएर आरक्षणका कारण त हो नि भनी अन्य जातका साथीहरूले टीकाटिप्पणी गरेको सुन्दा एमएडका गोल्ड मेडलिस्ट उनलाई निकै नमीठो लाग्छ ।
कवि, सञ्चारकर्मी लक्ष्मी रुम्बाले चाहे स्टेजमा कार्यक्रम चलाउँदा होस् या एफएममा बोल्दा प्रतिक्रियास्वरूप पाउने एउटै कुरो रहेछ– तामाङ भएर पनि कति प्रस्ट बोलेको ?
उनी कन्फयुजनमा पर्छिन्, यी शब्दहरू प्रशंसा हुन् या डोमिनेसन । साँच्चै नै कहिलेकाहीं प्रशंसा र डोमिनेसनका रेखा निकै ब्लर भइजाने रैछ । यस्ता प्रतिक्रियाहरू एकातिर सकारात्मकजस्तो देखिए पनि अर्कोतिर राम्रो बोल्ने काम भनेको त तथाकथित अभिजात वर्गकै मात्र हो भन्नेजस्तो बुझिन्छ । तामाङले त यस्तो बोल्न नसक्नुपर्ने भन्ने शंकाभाव देखाउँछ । कवि भुपाल राईको अनुभव पनि यस्तै छ । उनलाई बारम्बार आउने प्रतिक्रिया नै तपाईं त राईजस्तै बोल्नुहुन्न भन्ने रहेछ । जब राज्यको मूलधारबाट लामो समय टाढा रहेका जातिहरू पनि वैचारिक बहसमा खरो गरी उत्रन्छन् तब यस्ता संशयका शृंखलाहरू सामना गर्नुपर्छ । राईले यस विषयलाई लामो समयसम्म एउटै भाषा, एउटै नश्लबाट जो राज्य सञ्चालन भयो त्यसकै कारण अन्य जाति र उनीहरूले बोल्ने भाषाप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण भएको हो भन्छन् ।
राईकै कुरासँग मिल्ने विचार ‘कर्णालीको जनजाति र तिनको वास्तविकता’ नामक लेखमा छक्कबहादुर लामा र दीपेन्द्र रोकाया लेख्छन्— ‘जयस्थिति मल्ल होस् वा जंगबहादुर राणा, उनीहरूले ल्याएको मुलुकी ऐनले व्यवस्था गरेको जातअनुसार यी समुदाय (व्यासी र भोटे) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पेरिफेरीमा नै परे । त्यसमा नेपाली भाषाका कारण मातृभाषा, रहनसहन, धर्म, मनोविज्ञान, समग्र सोच्ने शैली नै ओझेलमा पर्दै गयो ।’
जंगबहादुरले लागू गरेको विसं १९१० को मुलुकी ऐनमा नै जातका आधारमा समाजको विभाजन गरिएको थियो । जातिको आधारमा राज्यसत्ता नजिक या टाढा पार्ने काम भएको थियो । पोडे–च्यामेहरूलाई घाम अस्ताएपछि सहरभित्र नपस्नू भन्ने उर्दी र तामाङलाई मासिन्या मतवालीको रूपमा राख्नुबाट मुलुकी ऐनले जारी गरेको डरलाग्दो विभेद छर्लंग हुन्छ । साहित्यकार आहूतिको विचारमा— केही जातबाहेक जंगबहादुरले जो जातको स्केज्युअल बनाएका थिए को कहाँ बस्ने भन्ने त्यो अझै पनि भत्केको छैन ।
राज्यले कानुनै बनाएर तामाङ जातिमाथि गरेको विभेदका कारण यस्ता जड मानसिकता अन्य जातिहरूमा विकास भएको प्रस्ट हुन्छ । यसै प्रसंगमा चिन्तक पाउलो फ्रेरेको विचार निकै सान्दर्भिक लाग्छ । शासकहरूले शासकहरूमा परपीडक मानसिकता हुर्काउँछ भने शासित वर्गमा आत्महीनता र मौनताको संस्कृति । त्यही शासक मानसिकता र मौनताको संस्कृतिकै उपज होलान् आजसम्म पनि विशेष जाति वर्गप्रति हुर्किएको ‘बायस्ड’ नजर । तर मौन रहने समय त रहेन अब । हामी लेख्ने या पब्लिक फोरममा बोल्ने जनजाति या दलित या अन्य पिछडिएका जातिहरूले बारम्बार पाउने भन्नु नै उनीहरूले लेखेको या बोल्न सकेकाप्रतिको घोर आश्चर्य । उनीहरू राज्यको कुनै उच्च ओहदामा पुगेको कुराले मच्चाउने सनसनी । मानौं कि राम्रो लेख्नु, बौद्धिक बहसमा भाग लिनु या उच्च ओहदामा पुग्नु कुनै निश्चित जाति वर्गको पेवा हो ।
मानसिकता या चिन्तन निश्चय नै एकराते घटनाको देन हैन । यो त शताब्दिऔँ लामो अभ्यासको उपज हो । जब तामाङलाई मासिन्या मतवाली भनेर देशको ऐनले नै तोकिदिएपछि उसको हकहित, अधिकार, जागिर खाने व्यापार गर्ने या आर्थिक समृद्धिका सम्पूर्ण बाटाहरू बन्द भए । जहिले पनि बिनाज्याला खानाको भरमा साहुको काम गर्नु, अशिक्षा, गरिबीले ग्रस्त हुनु सिवाय अन्य विकल्प रहेन । उनीहरूकै राम्रा छोरीहरू राणाहरूको नजरमा पर्नु, केही काण्डमा मारिए भने पनि राज्य तमासे भएर बसिदिनुजस्ता राज्यपक्षकै विभेदकारी नीतिमा परेको जातप्रतिको आम धारणा संकुचित हुनु स्वाभाविक नै पनि हुन सक्छ । कवि राजु स्याङतनको विचारमा पनि तामाङ जुन परिवेशबाट गुज्रिएर यहाँ आइपुग्यो शासकीय मनोवृत्ति भएकाहरूको नजरमा त तामाङ त हिजोकै तामाङ हो त्यसैले यस्ता संशयका शब्दहरू पोखिन्छन् ।
कुनै जातिविशेषलाई हेर्ने मानसिकतामा लचकता नै नआएको भन्ने पक्कै हैन । मैले एउटा जनजाति भए पनि सधैं नै सबै जातिका लेखक पाठकहरू या साथीहरूबाट न्यानो आत्मीयता पाएकी छु (एकाध तीता अनुभवबाहेक) । केही समयअघिको लमजुङ यात्रामा पूर्वी लमजुङ ढोडेनीका बोगटी परिवारबाट पाएको स्नेह र आत्मीयता अझै ताजै छ मनमा । यसका बाबजुद पनि जातको रहलपहल संकीर्णताले भने बेलाबखत पिरोल्ने गरेको छ ।
नेपाली साहित्यमा ठूलो योगदान दिएकी पारिजत हुन् या कवि कृष्णभूषण वल, नेपाली सुगम संगीतमा अतुलनीय काम गरेका गोपाल योञ्जन हुन् या निष्ठावान राजनीतिज्ञका रूपमा मानिएका निर्मल लामा या भीमबहादुर तामाङ सबै नै यही राज्यले उठ्न नदिएकै जातिबाट उछिट्टिएका हुन् त्यो गाह्रो समयमा पनि । आज त समय निकै फरक भइसकेको छ । विभिन्न पिछडिएका जातिवर्गका पढालेखा, क्षमतावान् ब्यक्तिहरू राजयसंयन्त्रका उच्च ओहदामा पुगेका छन् । राजनीति, कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान आदि सबै क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन सफल छन् । यसमा तामाङहरूको पनि बाक्लै उपस्थिति देखिन्छ ।
सहरका हट टक कुलमान घिसिङ या रुद्रसिंह तामाङ आफ्नो क्षमताका कारण त्यो उच्च ओहदामा पुगेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेका छन् । उनीहरूजस्तै धेरै तामाङ युवाहरू जागरुक भई अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसैले अब पनि जातको आधारमा कसैको बौद्धिकतामा प्रश्न उठाउनु या नाक खुम्च्याउनु भनेको मुलुकी ऐनको धङधङीसहितको संकीर्णता ओकल्नु मात्रै हुन सक्छ ।
त्यो ‘हयाङओभर’बाट उत्रिन ढिला भएन र ?
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७३ १३:५७
सन् १९८९ मा ‘नेससनल इन्ट्रेस्ट’ मा छापिएको राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाको निबन्ध ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री ?’ ले पश्चिमी प्रजातन्त्रको निकै प्रशंसा गरेको थियो, ‘हामीले जे देखिरहेका छौं, यो शीतयुद्धको अन्त्य मात्रै होइन वा युद्धपछिको विशेष समयको इतिहास पनि होइन ।
जुन प्रकारले पश्चिमी उदार प्रजातन्त्र नै मानवीय सत्ताको अन्तिम बिन्दु हो भन्ने विषयको विश्वव्यापीकरण भयो, त्यो नै मानिसको विचार उत्पादनको अन्तिम बिन्दु हो र एउटा इतिहासकै अन्त्य हो ।’ तर तिनै फुकुयामाका लागि डोनाल्ड ट्रम्पको विजय र हिलारी क्लिन्टनको पराजय— ‘पपुलिस्ट राष्ट्रियताको नयाँ युगको सुरुआत हो । यो अमेरिकी राजनीतिको मात्र नभएर पूरै विश्व व्यवस्थाका लागि पानीढलो हो ।’ अन्य विज्ञहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावी नतिजाका करणहरू खोजिरहँदा फुकुयामाको विश्लेषण भने जबर्जस्त रूपमा वर्गको धारणामा केन्द्रित छ । चुनावपछिका केही अवसरहरूमा उनले वर्ग विभाजनले पहिचानसँग गाँसिएका अन्य सबै विभाजनलाई किनारा लगाउने कुरा दृढताका साथ राख्दै आएका छन् । फाइनान्सियल टाइम्समा छापिएको एक विश्लेषणमा उनले लेखेका छन्, ‘आजको औद्योगीकरण तथा बढ्दो बजारको युगमा समाजमा विभाजन ल्याउने थुप्रै विषयमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिसको पढाइको स्तर भएको छ । यसले मानिसको सामाजिक वर्गको पनि व्याख्या गर्छ ।’ यसै क्रममा अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी अब ‘पहिचानको राजनीति गर्ने पार्टी : महिला, अफ्रिकी–अमेरिकी, हिस्प्यानिक (अमेरिकामा बसोबास गर्ने दक्षिणी अमेरिकी), वातावरणवादी, तेस्रोलिंगी तथा समलिंगीहरूको गठबन्धन’ बनेको छ जसले आर्थिक विषयहरूमा आफ्नो ध्यानभंग गरेको छ । यिनै सेरोफेरोमा फकुयामासित पत्रकार नटलिया कौलिंकाले गरेको यो अन्तर्वार्ता ‘ओपन डेमोक्रेसी डट नेट’ बाट साभार गरिएको हो ।